Ukudlala kukaGoogle kuhlaziywa ngemisebenzi emithathu esemthethweni | I-Androidsis
Ukudlala kukaGoogle kuhlaziywa ngezimbo zomzimba ezintsha kunye nefilitha yokujonga
Ukudlala kukaGoogle kuhlaziya ezi veki ngemisebenzi emitsha, ezinye zazo sele zingenisiwe. Ngoku lithuba lika uhlaziyo olutsha kwivenkile ye-Android. Ezi zinto zintsha ziye zaziswa evenkileni bezikhe zavavanya kwezi veki zidlulileyo. Kodwa ekugqibeleni sele zikhutshelwe bonke abasebenzisi abakwi-Android.
Ngeli xesha sifumana iitotali izinto ezintathu ezintsha kolu hlaziyo lukaGoogle Play. Uphuculo olutsha olujolise ekusetyenzisweni okungcono kweapp kwi-Android ngabasebenzisi. Ukuqhubeka ngale ndlela notyekelo lwe yazisa ukuphucula kwezi veki zidlulileyo.
Sifumana ntoni kolu hlaziyo? Kwisandle esinye icandelo lezimvo lihlaziyiwe, into esele iqale kwithuba elidlulileyo, ngoku sifumana utshintsho olutsha malunga noku. Ukongeza, sikwanazo nezimbo zomzimba ezintsha kuyo. Sikuxelela konke malunga nezi ndaba kule venkile ingezantsi. Ezinye izinto ezintsha esele zisungulwe ngokusesikweni ngohlaziyo lwayo.
1 Icebo lokucoca ulwelo
2 Umqondiso wokuvala umfanekiso
3 Cinezela ixesha elide ukubona ukhetho
Olokuqala kwiinguqulelo kuGoogle Play kukwaziswa kwesihluzo soluvo. Xa sityelele iprofayile yeapps sinokubona izimvo zabasebenzisi abazikhupheleyo. Kude kube ngoku, bekungekho ndlela yokucoca uphononongo ngokusekwe kwiiparameter ezithile. Kodwa le nto sele iyinto esemthethweni, emva kokubhengezwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Icebo lokucoca ulwelo sele likhona kuGoogle Play.
Enkosi ngayo sinako hluza olu hlaziyo ngokusekwe kwiindlela ezithile. Umzekelo, kuya kubakho ukubona ezo zimvo zingalunganga, okanye ubone kuphela ezilungileyo. Kukho ithuba loku-odola ngokusekwe kumanqaku ngendlela efanelekileyo. Ke sinokuba nembono ecace ngakumbi malunga nokuba bacinga ntoni abasebenzisi be-Android malunga nomdlalo othile okanye usetyenziso. Uyakuthanda ukusebenzisa ivenkile ngale ndlela.
Umqondiso wokuvala umfanekiso
Izimbo zomzimba ziyafumaneka kwi-Android, into ekwabonakalaliswa kolu hlaziyo kuGoogle Play. Enkosi kuyo, xa sivula izikrini okanye imifanekiso yokwazisa kwifayile yeapp, ukuze sikwazi ukubona ujongano lwayo, sinokuyivala ngokukhawuleza kunangaphambili. Kude kube ngoku kuye kwafuneka siphume efotweni emva koko siye kwelandelayo. Ke, ukwaziswa kwendlela esinika ithuba lokuba siyenze ngokukhawuleza.
Ukusukela ngoku ukuya phambili sifumana umqondiso osisilayida ukuvala. Ke ngoko, ngokushenxisa loo mfanekiso phantsi, siya kubona ukuba uyavala. Ke sibuyela kwithebhu yeapp okanye umdlalo ekubhekiswa kuwo kuGoogle Play. Ukongeza, kwicandelo eliphezulu lasekhohlo lefoto kukho wazisa iqhosha ngasemva. Ke siya kuba nakho ukuwuvala umfanekiso. Iinguqu ezimbalwa ezisivumela ukuba sihambe ngokukhawuleza phakathi kweefoto ezisevenkileni.
Cinezela ixesha elide ukubona ukhetho
Ukugqibela kweendaba ukufika kuGoogle Play kuhambelana neyangaphambili. Yinto ebonwe kwezi veki kwabanye abasebenzisi kwaye ekugqibeleni isemthethweni kubo bonke abasebenzisi abakwi-Android. Amachaphaza amathathu athe nkqo kwikhadi lokusebenza ayanyamalala. Ke ngoko, ukuba sifuna ukubona ukhetho lwayo, njengokungena kongeza kuluhlu lomnqweno, kufuneka sisebenzise esinye isenzo. Kulula kakhulu.
Into ekufuneka siyenzile kukucinezela kwaye ubambe kwikhadi lokusebenza. Umatshini wokushicilela omde, apho ukhetho lwesicelo okanye umdlalo uza kuvela kwiscreen. Eyona nto ilula ukuyiphumeza, ke iqinisekile ukuba kubasebenzisi abaninzi kuGoogle Play kulula ngakumbi. Inqaku ngoku liyafumaneka kubo bonke abasebenzisi kwivenkile yeapp.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukudlala kukaGoogle kuhlaziywa ngezimbo zomzimba ezintsha kunye nefilitha yokujonga
I-Galaxy S10 iphantsi kovavanyo oluthandwayo lokunyamezela
Izicelo ezincinci ezaziwayo ze-Android kodwa ngaphezulu kwe-100 yezigidi zokukhuphela